Track Roller Bearings Smooth Bad - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ukulandelela i-Roller Bearings i-Smooth Bad
Ukulandelela i-Roller Bearings i-Smooth imbi
Izibhebhe zokugubha iziqhumane ezisebenzisa ukusika amanzi okuzenzekelayo, umsebenzisi uzobe esesimweni sokugcinwa komshini kanye nemizamo yokuphatha
ukulawula isizukulwane sokubola, ngisho nokuqeda ukubola. Ukuze ugweme ukubola kwamanzi phezu kwensimbi, kufanele ngaso sonke isikhathi umise umshini emafutheni amafutha ashisayo, izingxenye ezibalulekile zomshini we-smear grease.
Izibhebhe zokugqekeza ezihamba ngezinyawo ekusetshenzisweni okulungile, zingaba nokuphila okude.Uma kungakabonakali ukukhombisa umonakalo, kungenzeka ngenxa yeziphambeko zokukhethwa, ukusetshenziswa kokubunjwa okungalungile noma okubushelelezi.
Ngakho-ke, kudivayisi esebenzayo, sidinga ukurekhoda imishini ehlukahlukene, izingxenye zedivayisi, ukusetshenziswa kwezimo nokuzungezile. Ngemva kokutadisha ukufingqa uhlobo lokulimala, ukuhlasela ukusetshenziswa kwemvelo, ukuvimbela isimo esifanayo futhi.
Ukulawula ngokunembile ukuhlushwa kwe-cutting fluid, lapho umshini usebenza, nge-fluid yokusika ukuhlanza ukubonakala komshini ohlanzekile, kodwa futhi ukuvula isihlangu somshini wokubhubhisa indawo yomsebenzi womshini omanzi. Ukuze ugweme ukutholakala kokuguguleka komgogodla kagesi, kumele kusetshenziswe kwipuphu yensimbi engqimba umgogodla wamafutha angenawo amanzi. Ukuze kuvinjelwe ukuzala nokukhiqizwa kwamabhaktheriya, kufanele njalo uhlanze noma uguqule uketshezi kokusika, ukubhujiswa okwesikhashana kwamapipi, kodwa futhi ukusebenzisa amanzi athambile) Nciphisa ukugxila kokugxila.
Izibhebhe ze-cylindrical roller ngaphezu kwekhwalithi elihle kakhulu, kodwa futhi ziyingxenye ezinhle kakhulu, kokubili ukubheja okusebenza kahle, uma kusetshenziselwa ukusetshenziswa okungalungile, akugcini nje ukufeza imiphumela yokusebenza oyifunayo, futhi kulula ukulimaza ukuthwala, ngokwebushelelezi Ngokuqinisekile kufanele unake.
Okokuqala, ukusebenzisa idivayisi kufanele kuqaphele ukuthi ungavumeli ukugxila okujulile, ungavunyelwe ukusebenzisa ukushayela okuqondile, ungavumeli ukugudluza ngokusebenzisa ingcindezi yokudlulisela.
Okwesibili, ukusetshenziswa kwamathuluzi afanelekayo anembile ekusebenziseni amathuluzi akhethekile, zama ukuvimbela ukusetshenziswa kwezindwangu kanye namafayili amancane nokunye okunjalo.
Okwesithathu, zama ukunamathela ekuthwaleni kanye nemvelo eyakhelene nayo ihlanzekile ngisho noma iso elingenakubona ukuthungatha uthuli lingene ekuthwaleni, kuzothuthukisa ukugqoka, ukugubha nokuzwakala.
Okwesine, ukugwema ukubola kwesibhamu ngokubamba ngesandla, kubalulekile ukugeza izandla zelesi, futhi ugcoke ngamafutha aphezulu amaminerali bese umisa ukusebenza, ikakhulukazi ngenkathi yemvula nasehlobo ukulalela ukunqunywa. Ngaphansi kwemibandela ethile yokusebenza, ukubheja kwezingoma zengoma kungaphumelela impilo engcono ekubalweni kwendabuko, ikakhulukazi ezimweni zokulayisha ezikhanyayo. Lezi zimo ezikhethekile zokusebenza yilapho izindawo ezihambayo (imigwaqo kanye nezakhi eziguqulwayo) zihlukaniswa ngokuphumelelayo nefilimu efuthayo yamafutha futhi ukungcola kungonakaliswa. Eqinisweni, ngaphansi kwezimo ezihle, lokho okuthiwa ukuphila okuphakade kungenzeka.
Ngemuva kwedivayisi yokuthwala, uma kungenqamuki ngokucophelela ukulungiswa, ukulungiswa kungahle kubangele ukubheja kube nemithwalo eyengeziwe, ukuxubana nokudlidliza. Lokhu kungase kuphuthumise ukukhathala nokunciphisa ukuthela impilo, futhi kungalimaza ukusetshenziswa kwezinye izingxenye zomshini. Ngaphezu kwalokho, ukukhushulwa nokuxubana kungakhuphula kakhulu izindleko zamandla kanye nezinhlekelele ezingakapheli isikhathi.
Ngesikhathi ukusetshenziswa kokusebenza njalo kokubhekene nezimo eziyisisekelo ukuyeka ukuqapha, njengokushisa, ukudlidliza kanye nesilinganiso somsindo njalonjalo. Lokhu kuhlola okujwayelekile kuzothola izinkinga ezingase kuvele kusenesikhathi futhi kuzogwema ukuhlaselwa komshini okungalindelekile, okuvumela izixazululo zabathengi ukuba zigcwaliswe, futhi kuthuthukiswe amandla okusetshenziswa kwemvelo nokusebenza kahle.
Phakathi nenkathi yokusebenza, isicelo sokuthwala i-roller track sinokubukeka kahle futhi futhi ukusebenza kwayo kuqediwe. Indlela ebushelelekayo yokuthwala, ihlukaniswe ngamafutha abushelelezi nebushelelezi. Ukuze wenze i-bearings ibambe kahle, okokuqala, ukukhetha izimo ezifanele zokusetshenziswa, ukusetshenziswa kwenhloso yendlela ebushelelezi. Uma nje ucabanga ukubushelela, ukubusa kwe-soft smooth smooth. Kodwa ubushelelezi buka-grease buyakwazi ukwenza lula ubuchwepheshe bokubhekelana nesakhiwo.
Lapho ama-bearings roller ithrekhi azofika ekupheleni kwesikhathi sabo sokusebenzisa, kufanele asuswe. Nakuba amabhethri awakwazi ukusetshenziselwa futhi, kodwa ukususwa okulungile kwezingxenye zokuqala, ukushintshaniswa okuhamba kwesikhathi kwamabheresha amasha, ukwandiswa kwempilo yamabherethi amasha kungadlala indima enhle ekukhuthazeni. Okokuqala, ukusetshenziswa kwamathuluzi okususa okufanele kuzosiza ukuvimbela ukulimala kwamanye amashini omshini, futhi okwesibili, ubuchwepheshe obungasuswa ngendlela engafanele bungaba yingozi ku-opharetha.
I-Miniature Deep Groove Ball Bearings Industry Development
I-Deep Groove Ball Bearings Gqoka indlela